Munamato wevana ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Iwe unoda kudzidzisa vana vako kunamata asi iwe hauzive pekutangira, apa isu tichakuudza iwe munamato wevana izvo zvavanogona kuita mangwanani kana husiku vasati varara.
1 Sei tichiita munamato wevana?
2 Munamato wevana
2.1 Munamato kune Mutumwa Guardian
2.2 Na Mwari ndinonyepa
2.3 Jesu mudiki wehupenyu hwangu
2.4 Makona mana madiki
2.5 Baba vedu
Sei tichiita munamato wevana?
Vana vanowanzo kuve nekutya, kunyanya husiku. Nzira yakanakisa yekuvaita kuti vazive kuti vanochengetedzwa ndeyekunyengetera.Sekungotendeukira kuna Mwari munguva dzezvinetso, tinokwanisa kudzidzisa vana vedu kuita zvakafanana.
Naizvozvo, kana mwana wako achitanga kuchikoro uye vakataura naye nezvechinamato uye iwe usingazive nzira yekutaura nyaya iyi, tinokurudzira kuti utange kumudzidzisa chitendero kuburikidza nemunamato, ndiyo nzira inozomutungamira kuti azive Mwari kubva nenzira yakapusa uye ichakuzadza nerudo.
Zvakare, yakapusa nzira yekudzidzisa munamato wevana Panguva yekurara, kuva netsika kana uchienda kunorara kunogona kunzwa kuchengetedzwa nekuti dzimwe nguva vanotya rima, kana kuti chikara chinoonekwa pasi pemubhedha kana chokwadi chiri nyore chekuva wega.
Muchikamu chino tinokuunzira mitsara yakapusa uye yakajairika yekuti iwe udzidzise mwana wako zvishoma nezvishoma sezvavanokura. Zvakare, tinokukoka iwe kuti uverenge chinyorwa chedu pa Minyengetero yekubhabhatidzwa.
Vanababa chitubu chekutenda kuvana
Tsika yemunamato, yakatanga kumashure makore mazhinji apfuura, kuisa munamato muvana vako, inofanirwa kunge iri nenzira inonakidza uye kuti havaione sechisungo kana kuzvipira, kana zvisiri kudaro sechinodiwa uye tsika yekutaura kuna Mwari.
Panguva yekurara inguva yakakodzera kwazvo, nekuti unogona kuzviita chikamu chemanheru ehusiku, nekupfeka mapijama ako, kukwesha mazino ako, kunamata uye pakupedzisira kuenda kunorara. Tinokuunzira minamato yakanaka kwazvo uye ine chinangwa kuti uzviite pamwe nevana vako.
Munamato kune Mutumwa Guardian
Ngirozi inochengeta ndeimwe yeminyengetero yakakosha kuvana, nekuti kuburikidza nemunamato uyu vanowanzo kunzwa vakachengeteka sezvo ngirozi yavo inovachengeta ichavachengeta pavanopinda munyika yakanaka iyoyo, inova nyika yeMaroto.
Guardian ngirozi, inotapira kambani,
musandisiya, kana usiku kana masikati,
kusvikira mandiisa murugare nemufaro
nevatsvene vese, Jesu, Josefa naMaria.
Mwana Jesu huya pamubhedha wangu,
Na Mwari ndinonyepa
Kune chidiki cheimba, vasingakwanise kudzidza munamato wakareba kudaro, tinovadzidzisa kuda Mwari kubva pane chakanyanya kukosha, uyu munamato unogona kuitwa zvese pakurara kana pakumuka.
NaMwari ndinoenda kunorara, naMwari ndinosimuka,
neMhandara Maria neMweya Mutsvene.
Jesu mudiki wehupenyu hwangu
Saizvozvo, isu tinofanirwa zvakare kuwedzera iyo nyaya yaJesu Kristu muponesi wenyika uyo akatisunungura kubva kuzvivi, pamwe nechibairo chake, saka unofanira kudzidzisa vana kuti Jesu aive akanaka mwana uye akazvipira pakuteerera kushoko raMwari.
Jesuito wehupenyu hwangu, iwe uri mwana seni,
Ndiko kusaka ndichikuda zvakanyanya
uye ndinokupa moyo wangu.
Makona mana madiki
Munamato uyu unogona kuperekedzwa nemutumwa anochengeta, ivo vana vanotya kurara vega, vasati vaenda kunorara unogona kunamatira navo kuitira kuti vanzwe kuti husiku hwese vachange vaine ngirozi yavo inovachengeta uye nevatumwa vadiki vana vakatarisa kurara kwavo. muboka reMhandara Maria.
Mubhedha wangu une makona mana,
ngirozi diki ina dzinondichengetera,
neMhandara Maria anova shamwari yangu.
Munamato unofanirwa kuti muKaturike wese azive iwo Munamato waIshe, kubvira isu taive vadiki vabereki vedu vakatidzidzisa uye vakadzokorora uyu munamato. Uine vana vako unogona kuzvidzidza zvishoma nezvishoma uye zuva rega rega uchiwedzera zvimwe, kudzamara vakwanisa kuzvitaura zvakakwana.
Zita renyu ngarikudzwe noutsvene,
umambo hwenyu ngahuuye,
Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.
Tipei nhasi chingwa chedu chamazuva namazuva,
regererai zvitadzo zvedu uye
Usatirega tichiwira mumuedzo,
uye mutinunure pane zvakaipa,
Nekudaro, uyu munamato mubatsiri kune vamwe vese, isu hatifanire kusiya parutivi Mweya Mutsvene, tinofanira kuzivisa vana vedu kuti ariko uye kuti iye muranda waMwari pasi pano.
Mbiri kuna Baba neMwanakomana
uye noMweya Mutsvene.
ikozvino uye nguva dzose,
Neiyi nzira, vana vako vanozogona kunzwisisa zvinoreva Ishe Wedu Mwari, uye zvinoreva chirevo chimwe nechimwe, nekudaro ivo vanozogona kunzwisisisa zvishoma nezve chitendero uye nemazano aMwari.
Saizvozvovo, kana iwe uchinamata nevana vako, iwe unogadzira chisungo chakakosha, icho pavanokura vanozonzwa vane chivimbo newe, ivo vanozokumbira kuraira kwako uye ivo vachakubatsira iwe, nekuti ivo vanonzwa vari padhuze newe. Saka kana yasvika nguva yekurara, ivo ndivo vachazokuyeuchidza, amai / baba, inguva yekurara, ngatinamatei, nekuti ichave yavo yavanofarira nguva yezuva.
Vabereki ndivo vanozobatsira vana vavo kubatana naMwari. Nekudaro, sezvavanokura, kubatana kwavo kunozosimba kusvika pamuganho wekuzvigadzirira minamato uye yekutenda Mwari nemakomborero akagamuchirwa. Vana kuita minamato panguva yekurara vanozopedzisira vatore kutya kwavo kwerima, uye yekuva vega mumakamuri avo.
Rosary kuMhandara yeGuadalupe
Holy Rosary Chishanu
Holy Rosary Chitatu
Munamato kungirozi yekuwanda
Munamato weSanta Francis